Miarahaba ny Clinton Foundation sy ny minisitry ny fizahantany Maorisy i Kaomoro
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Kaomoro » Miarahaba ny Clinton Foundation sy ny minisitry ny fizahantany Maorisy i Kaomoro
Ny filoha lefitra Kaomoro Djaffar Ahmed Said Hassni, izay tompon'andraikitra amin'ny fizahan-tany koa dia nandray ny mpikambana ao amin'ny Clinton Foundation ho ao amin'ny nosy nosiny. Ny fitsidihana dia mifanaraka amin'ny lahasa fampandrosoana maharitra mikendry ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampiroboroboana ny angovo azo havaozina.
Ny filoha lefitra Djaffar Ahmed Said Hassni avy any Kaomoro
miarahaba ny minisitra Anil Gayan avy any Maorisy
Ny filoha lefitry ny Kaomoro dia nilaza fa mahatsapa tsara izy fa manavao ny paikadim-pampandrosoana eto amin'ny nosy.
& Minisitra Anil Gayan avy any Maorisy
Tamin'ny fitsidihana avo iray hafa, Andriamatoa Anil Gayan, ny minisitry ny fizahantany any Maorisy, iray amin'ireo minisitry ny fizahantany lehibe ao amin'ny Vondronosy Nosy Vanilla Indianina, dia tao Comoros ihany koa mba hiady hevitra momba ny fiaraha-miasa amin'ny fizahan-tany amin'ny nosy rahavavy.
Fiaramanidina: Mbola mizarazara ny Afrikanina eo amin'ny tsenan'ny fitaterana an'habakabaka tokana
Qatar Airways manidina ny avana avy any Doha mankany Mykonos